AbaThengi bezinto zoMbane zoMbane nabaNikezeli-fektri baseFineral Fitigation Fitigation Factory
Indawo yokuQalwa kweDongying, iChina igama loShange ShengYu ubungakanani bazoba umthengi okanye iisampulu Ubungakanani obukhulu ≤1200mm × 800mm × 400mm Uluhlu lobunzima be-0.1Kg-120Kg Umphezulu weRassness Ra0.8-Ra6.3 Izinto zeS stainless, iAlloyum yensimbi, ICarbon iron, aluminium , ubhedu, njalo njalo. Unyango olungaphezulu lwe-oyile-kutu, i-Plating, Paint, Powing Powder, i-Polishing, njl. njl.
Izinto zokufakelwa kombane-04
Ukubona inkqubo yokuphosa intsimbi ukuza kuthi ga ngoku, khawube nomfanekiso-ngqondweni wakho uhamba elwandle usiya elwandle. Jonga unyawo olushiyekileyo kwisanti emanzi. Unyawo lwakho luya kuba sisiseko, kwaye umbono oshiyekileyo kwisanti uyimbumba yonyawo lwakho.
Izinto zokufakelwa kombane zombane-05
Ukutyhubela iinkulungwane, ukudityaniswa kwezinto ezingafaniyo kwezinto ezithile kuye kwenziwa ukuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zesinyithi. Ezinye iimveliso zokuphosa zisetyenziswa kwiinjini ezifuna ukunyamezelwa okuphezulu kobushushu nokubanda. Imibhobho yesinyithi yentsimbi kufuneka imelane nokudumba kunye noxinzelelo oluphezulu. Ezinye iindawo zokuphosa mazibe lula kodwa ziqine. Kwizicelo ezininzi, iinxalenye ziyilelwe ukuvumela ukunyamezeleka okuqinisekileyo phakathi kokukhula kunye nentengiselwano.
Izixhobo zombane zombane-06